မမတွေ အသက် ၃၀ ကျော်လာတဲ့အခါ ပိုပိုလှလာရတတ်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်
မမတွေ အသက် ၃၀ ကျော်လာတဲ့အခါ ပိုပိုလှလာရတတ်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက် အခုခေတ်ဟာ မမတွေရဲ့ခေတ်လို့ ပြောရလောက်အောင်ပဲ မမတွေက စံပြဖြစ်လာကြပါပြီ။ အသက် ၃၀ ကျော်လာတဲ့အခါ အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ မပြင်မဆင်တော့ဘဲ နေတတ်ကြတာကြောင့် အရောင်မှေးမှိန်သွားကြပေမယ့် ခုခေတ်မှာတော့ အသက် ၃၀ ကျော်လာတဲ့အခါ မမတွေက […]
သဘာဝနည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုပြီး ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ပျောက်ကင်းအောင်ကုကြမယ် …
သဘာဝနည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုပြီး ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ပျောက်ကင်းအောင်ကုကြမယ် … ဝက်ခြံကတော့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူငယ်တွေ၊ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ၊အမျိုးသမီးတွေတိုင်း ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပုံမှန်ကိစ္စတစ်ခုပါ။ဝက်ခြံဟာ မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု မညီမျှတဲ့အခါ ဂလန်းတွေကနေ အဆီတွေပိုထွက်စေပြီးတော့ ချွေးပေါက်တွေပိတ်စေပါတယ်။ အဒီအခါ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ပေါက်ဖွားစေပြီး ဝက်ခြံဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံဖြစ်ပြီးနောက် ပိုကြီးတဲ့ ပြဿနာကတော့ အမာရွတ်တွေကျန်ခဲ့တာပါ။ […]
သမီးလေး Victoria အတွက်အမှန်တရားအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ပါစေ shareခြင်းဖြင့်စည်းလုံးညီညွှတ်စွာအင်အားပြကြစို့ … ပိုက်ဆံရှိရင် အာဏာက အလိုလိုရှိလာသတဲ့လား …? ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းနဲ့ အမှန်တရားတွေကို ပါးစပ်ပေါက်ပိတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီလား …? 💔 🚨ကိုကိုလုပ်​တာ။ကိုကိုက အခန်းကျယ်​ကို ​ခေါ်သွားတယ်​…။ 🚨ဆရာမ နှင်းနု သိတယ်​…။ဆရာမနှင်းနု က ကိုကို ကိုဆူတယ်​…။ကိုကိုကို ​နောက်​မလုပ်​ရဘူးလို့​ပြောတယ်​ …။ […]
မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် ပေါက်သွားခဲ့တဲ့ ရဲရင့်အောင်ရဲ့ “စိတ်ရှည်သည်းခံ” သီချင်းအသစ် လူငယ်ကြိုက်တေးသံရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရဲရင့်အောင်ကတော့ ဂီတလောကမှာတော့ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ဆွတ်ခူးရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ …။ ရဲရင့်အောင်က လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် သီချင်းကောင်းလေးတွေကိုလည်း အမြဲတမ်း ဖန်တီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ရဲရင့်အောင်ရဲ့ သီချင်းတွေကလည်း […]
အမြန်လမ်းတွင် နွားလှည်းနဲ့ Express တိုက် နွားလှည်းမှ မောင်နှမ နှစ်ဦးလုံး သေဆုံး … အမြန်လမ်းတွင် နွားလှည်းနဲ့ Express တိုက် နွားလှည်းမှ မောင်နှမ နှစ်ဦးလုံး အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံး … ဇွန်လ(၃၀)ရက်​​နေ့ နံနက်(၀၅၃၀)နာရီအချိန်​ နေပြည်​​တော်​-မန္တလေး လမ်း မိုင်တိုင် ၂၇၂/၇ […]
နေပြည်တော်မူကြိုကျောင်းက သက်ငယ်မုဒိန်းမှုရဲ့အဓိက သံသရရှိသူ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် …
နေပြည်တော်မူကြိုကျောင်းက သက်ငယ်မုဒိန်းမှုရဲ့အဓိက သံသရရှိသူ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် … ကိုယ်တိုင်မမြင်ဖူးပေမယ့် အားလုံးက အသိမှတ်ပြုထားတဲ့တရားခံအစစ် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ပါအဖေက ရဲအုပ် အမေကတော့ အမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျောင်းအုပ်ပါ ….. ။ အကြီးကောင်က 10တန်းကျ…အငယ်ကောင်က 8တန်းတက်ရဲမှုးကြီးပြောသလို နှစ်ဖက်လုံးမနစ်နာစေချင်ပါဘူးဆိုတာက တရားခံညီအစ်ကိုက ကျောင်းသားဖြစ်နေလို့ပါတဲ့ ….. ကျောင်းသားဖြစ်လို့ မနစ်နာစေချင်ဘူးဆိုရင်မူကြိုကျောင်းသူလေးရဲ့ အရွယ်မသေးတဲ့ကလေးမလေးရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကရောအမှန်တရားဆိုတာ […]
နေပြည်တော် WISDOM HILL ပိုင်ရှင်ဦးပညာ၏ အမဖြစ်သူမှ ပြောလိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်
နေပြည်တော် WISDOM HILL ပိုင်ရှင်ဦးပညာ၏ အမဖြစ်သူမှ ပြောလိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက် နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မူကြိုကျောင်းတစ်ခုက သက်ငယ်မုဒိမ်းအမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲသူတွေကြားထဲမှာ နာမည်ကြီးနေခဲ့ပြီး အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့သူတွေဘက်ကတုန့်ပြန်ပြောကြားမှုမရှိခဲ့ပေမယ့် မူကြိုကျောင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူကတော့ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အခုလိုပြောပြခဲ့တာပါ …. ။ နေပြည်တော် […]
အတွေးလွန်ပြီး စိတ်ထိလွယ်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး
အတွေးလွန်ပြီး စိတ်ထိလွယ်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး မိန်းကလေးတွေထဲမှာ အရမ်းကိုစိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ခံစားလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သူတို့ရဲ့ ဖြူစင်မှုဟာ အများအမြင်မှာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ခံစားလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ် ….. ။ (၁) […]
ချစ်သူက ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး ကလေးလိုပဲ မြင်ပေးတတ်တဲ့ ကိုကိုတွေဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ
ချစ်သူက ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး ကလေးလိုပဲ မြင်ပေးတတ်တဲ့ ကိုကိုတွေဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေဟာ ကိုယ့်ကိုတကယ်ပဲ ခွင့်လွှတ်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်အပြည့်ရှိကြပါတယ်။ ဒီလို ကိုကိုတွေနဲ့ ချစ်မိတဲ့ ကောင်မလေးတွေကတော့ ဆိုးချင်သလိုဆိုး၊ ချွဲချင်သလိုချွဲ ကိုကိုတွေက အချစ်မလျော့တဲ့အပြင် ပိုလို့တောင် တိုးလာပါသေးတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ ဒီလိုကိုကို ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင် […]
နေပြည်တော်မူကြိုကျောင်းမှ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးငယ်လေးရဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်စေဖို့ အဓိက သက်သေ နှင်းနုလွင်
နေပြည်တော်မူကြိုကျောင်းမှ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးငယ်လေးရဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်စေဖို့ အဓိက သက်သေ နှင်းနုလွင် ” နှင်းနုလွင် မိဘများနှင့် သူမ၏ဆွေမျိုးများသိစေရန် ” (Wisdom hill ကျော်င်းပိုင်ရှင် ၏ အမ ဖြစ်သူ Thiri May ကိုယ်တိုင် နှင်းနု လို့တရားဝင်ပို့စ်တင်မှ ကျနော်က ပုံတင်တာပါနော်။ စည်းရှိပါတယ်… […]